Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: January 2010
* 1 ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း
*2မြန်မာ့သမိုင်းအစမှ ၁၈၈၅ ခုနှစ်အထိ
*3၁၈၈၅-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၂-ခုနှစ်အထိ
*4အမည်အခေါ်အဝေါ်ဆင်းသက်လာပုံ
o 4.1 မိန်းကု
o 4.2 မိန်းကွတ်
o 4.3 မိန်းကတ်
* 13 ဘာသာရေး
* 14 မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
* 15 စေတီပုထိုးများ
* 16 စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများ
o 16.1 ထာပွဲ
o 16.2 ဒေသခံတို့ ခေါ်ဝေါ်သော ကျောက်အမည်များ
+ 16.2.1 ပတ္တမြား
+ 16.2.2 နီလာ
+ 16.2.3 အညံ့
+ 16.2.4 နတ်သွေးကျောက်
+ 16.2.5 ပြောင်ခေါင်းစိမ်း
o 16.3 ပွင့်ကောက်သမား
o 16.4 အစပ်ကျောက်သမား
o 16.5 ၀ယ်/ ရောင်းသမား
o 16.6 ပွဲစား
* 17 ကျမ်းကိုး
“ကိတ်၊ နဂါး၊ ကြွက် သုံးစဖော်ယှက်၊ ကျောက်မျက်ရတနာပေါ်ထွက်လာ ဂန္ဓာလတိုင်း၊ သမိုင်းပွင့်ဆန်း၊ ပင်သဖန်းဟု၊ မော်ကွန်းထိုးထုတ်၊ မြို့မိုးကုတ်” ဟူသော ရှေးဟောင်းတပေါင်အရ ကိတ်သည် ၉၊ နဂါးသည် ၇၊ ကြွက်သည် ၅၊ ၄င်းကိုပြောင်းပြန်ယူသော် ၅၇၉ ဖြစ်ပြီး ထိုနှစ်တွင် သဖန်းပင်ရွာကို အရင်းတည်ပြီးမှ မိုးကုတ်မြို့ကို ဆက်လက်တည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မိုးကုတ်သမိုင်းများစွာ၏ အဆိုအရ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၅၇၉ ခုနှစ် မိုးမိတ်စော်ဘွားကြီး သိုဟန်ဖက်လက်ထက်တွင် သူ၏ပိုင်နက်ဖြစ်သော ယခုမိုးကုတ်မြို့ဖြစ်လာမည့်နေရာသို့ ရှမ်းမုဆိုးသုံးယောက်သည် တောလည်ထွက်ရင်း မျက်စေ့လည်လမ်းမှားကာ ရောက်ရှိလာပါသည်။ မိုးလည်းချုပ်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် လမ်းစရှာမရတော့ဘဲ တောတောင်ခြေရင်းတစ်ခုရှိ သဖန်းပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင် အိပ်လိုက်ရပါသည်။ နံနက်မိုးသောက်ချိန်ရောက်သော် အနီးရှိပြိုကျနေသောတောင်စောင်းတစ်ခုပေါ်တွင် ကောင်းကင်ယံမှ ကျီးများ၊ စွန်များ ပျံဝဲဟစ်အော်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထူးခြားသည်ဆိုပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုရာ အသားတစ်ပမာနီမြန်းနေသည့် ပတ္တမြားကျောက်အနီများက်ို တွေရှိရသဖြင့် ယူဆောင်ခဲ့ပြီး မိမိတို့ အရှင်သခင်စော်ဘွားကြီးကို ဆက်သခဲ့ကြပါသည်။ စော်ဘွားကြီးကလည်း ဆက်သလာသော ပတ္တမြားကျောက်နီများကို လက်ခံယူပြီး တန်ဖိုးရှိမှန်းသိသောကြောင့် ထိုနေရာအားလိုက်လံပြသခိုင်းပြီး ထိုနေရာကို စောင့်ရှောက်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုပတ္တမြားမြေကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ကျသူများက သဖန်းပင်ကြီးအနီးတွင် ရွာတည်ပြီးနေသည်မှစကာ သဖန်းပင်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့မိုးကုတ်သမိုင်းစာအုပ်များတွင် မိုးကုတ်အစ သဖန်းပင်ကဟု လည်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ သဖန်းပင်ရွာတွင် ပတ္တမြားတွင်းများကို စောင့်ရှောက်တာဝန်ယူရသော ရှမ်းလူမျိုးများ တဖြည်းဖြည်း မိုးကုတ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် တိုးချဲ့နေထိုင်လာခြင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းမှနေပြီး နောင်တွင် မိုးကုတ်မြို့ဟု ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မောင်ထွန်းဦး ၏ (ကမ္ဘာကသိတဲ့ ပတ္တမြားမြေ) မှ မှီးပါသည်။့ 
မြန်မာဘုရင်များအဆက်ဆက်တွင် အထွတ်အမြတ်ထားခဲ့သော ပတ္တမြားငမောက် ကျောက်မြတ်ရတနာကို မိုးကုတ်ပတ္တမြားနယ်မြေအတွင်း အင်းခေါင်းမှ ရရှိသည်။ ၄င်းကျောက်ကို အင်ကြင်းတောင်နှင့် ကျောက်ဆောင်လူးတော်များမှ ရသည်ဟုလည်း မူကွဲလျှက်ရှိသည်။
ရရှိပုံမှာ ချင်းတွင်းနယ်သားဖြစ်သော ငမောက်ဆိုသူသည် မိုးကုတ်နယ်မြေတွင် လာရောက်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ရာ၊ တစ်ညသောအခါ မိမိခြံအတွင်းမှ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် အရောင်တလက်လက်နှင့် ထူးဆန်းတောက်ပ နေသည်ကို မြင်ရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုလေသော် အလွန်တရာလှပသော ကျောက်နီ ပတ္တမြားကြီး တစ်လုံးကို တွေ့ရှိလေသည်။ ငမောက်လည်း ၀မ်းသာစွာ ကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက် သိမ်းဆည်းထားရာမှ ၂ပိုင်းခွဲပြီးလျှင် တစ်ပိုင်းကို ယောက်ဖဖြစ်သူ မောင်ရွှေအား တရုတ်ပြည်ဘက်သို့ ရောင်းရန်စေလွှတ်လိုက်ပြီးနောက်၊ ကျန်တစ်ပိုင်းကို သက္ကရာဇ် ၁၀၂၃ခု၊ ငါးထပ်ကြီးဒါယကာ ပင်းတလဲမင်း လက်ထက် အင်းဝမြို့တော်သို့ သွားရောက် ဆက်သရာ ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း များစွာနှစ်သက်အားရ ၀မ်းမြောက်လှသဖြင့် ငမောက်အား ဆုတော်ငွေများ ပေးသနားတော် မူလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုပတ္တမြားကို ငမောက်ဆိုသူ ဆက်သသဖြင့် ငမောက်ပတ္တမြား ဟု ထင်ရှားကျော်စောလေသည်။ တရုတ်ပြည်သို့ ရောက်သွားသော ထိုကျောက်တစ်ပိုင်းမှာလည်း ထိုအချိန်၌ တရုတ်ပြည်တွင် မင်မင်းဆက် ပျက်စီးပြီး တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေသောကြောင့် နီးစပ်ရာတိုင်းပြည်များသို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်နေကြသဖြင့် တရုတ်ပြည်သို့ ရောက်သွားသော ထိုကျောက်တစ်ပိုင်းကို မြန်မာပြည် ခိုဝင်လာသော တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးလက်ထဲတွင် ငမောက် ရောင်းချခဲ့သော ပတ္တမြားတစ်ပိုင်းလည်း ပါလာခဲ့ပါသည်။ ထိုတရုတ်လူမျိုးကုန်သည်ကြီးသည် ထိုပတ္တမြားတစ်ပိုင်းကို မြန်မာဘုရင်အား ဆက်သခဲ့ရာ ဘုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပြီး ဆုတော်ငွေများ ပြန်လည်ပေးသနားခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း ၀မ်းသာအားရ၊ မိမိတွင်ရှိရင်းဖြစ်သော (ငမောက်)ကျောက်တစ်ခြမ်းနှင့် ဆက်စပ်ကြည့်ရာ တစ်လုံးတည်း ရှုမငြီးသည့် ကျောက်ကြီး ဖြစ်ကြောင်းသိကာ၊ ငမောက်အား အားလုံးကို မဆက်သရသလောဟု အမျက်တော်ပွားသဖြင့်၊ မင်းပရိယာယ်ဖြင့် ရေဝေးရာတောင်ကုန်းတွင် မီးလောင်စင်ကြီးများ ပြုလုပ်ပြီး၊ ငမောက်၏ ဆွေ(၇)ဆက် မျိုး(၇)ဆက် ကိုခေါ်ကာ ကွပ်မျက်တော်မူလေသည်။ ငမောက်နှင့် ဆွေမျိုးများ သေဆုံးခဲ့ရသောနေရာကို လောင်းစင်ရွာဟူ၍၄င်း၊ ရေနှင့်ဝေးသောနေရာဖြစ် ၍ ရေဝေးရွာ ( နောင်တွင် ရေဝေရွာ ) ဟူ ၍ ၄င်း ယခုတိုင် ခေါ်ဆိုနေကြသေးသည်။ မီးတိုက်နေသော အခြင်းအရာကို ငမောက်၏ အမဖြစ်သူ ဒေါ်နန်း မြင်လျှင် လွတ်ရာသို့ ပြေးရရှာလေသည်။ တောင်ပေါ်တစ်ခုသို့ ရောက်သောအခါ ပြန်လှည့် ကြည့်လိုက်ရာ၊ များစွာပူပင်သောက၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်ပြီး ရင်ကွဲနာကျကာ ထိုတောင်၌ပင် သေလေသည်။ ၄င်းသေဆုံးရာ၌ လွမ်းစေတီကလေး တစ်ဆူကိုပင် တည်ထားလျှက်ရှိပေသည်။ ဒေါ်နန်းလှည့်ကြည့်သည့်တောင်ကို အစွဲပြုပြီး ဒေါ်နန်းကြည့်တောင်၊ ကာလကြာသောအခါ ဒေါ်နန်းကြည်တောင် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ ၄င်းပတ္တမြားမျက်ရှင်မှာ တတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲတွင် အစတုံးကာ လုံးလုံးကြီး ကွယ်ပျောက်ပြီး မည်သည့်လက်သို့ ရောက်နေသည်ဟု အသေအချာ မပြောပြနိုင်တော့ပေ။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 12:34 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
[[Image:| frame | right |thumb|ဂျော့ခ်ျ ၀ါရှင်တန်(၁၇၃၂-၁၇၉၉)]]
Nationality File:Flag of .png အမေရိကန် နိုင်ငံ
ဂျော့ခ်ျ ၀ါရှင်တန်(George Washignton)(၁၇၃၂-၁၇၉၉) အားဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊၀ိတ်ခ်ဖီးလ် တွင် ချမ်းသာသည့်မြေပိုင်ရှင် မိသာစုမှ မွေးဖွားသည်။အသက် ၂၀တွင် အမွေအများအပြားရသဖြင့် ငယ်ငယ်နှင့် သူကြွယ်ဖြစ်လာသည်။၁၇၅၃ မှ ၅၈ထိ ပြင်သစ်-အင်ဒီးယန်း စစ်ပွဲများတွင် လိုက်ပါ စစ်မှုထမ်းဖူးပြီး တိုက်ခိုက်ရေးဖက်တွင် နာမည်ရခဲ့သည်။စစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး ဇာတိသို့ ပြန်လာကာ ကလေး ၂ ယောက်မိခင် ချမ်းသာသော မုဆိုးမနှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။သို့သော် သားသမီးမထွန်းကာပေ။၁၅နှစ်တိုင်တိုင် မိမိပိုင်စိုက်ခင်းတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၁၇၇၄ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် ပထမအကြိမ်ကွန်တီနယ်တယ်ကွန်ဂရတ် တွင်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်သည်။သို့သော် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် လှုံဆော်ကြိုးပမ်းသူများထဲတွင် မပါဝင်ပေ။သို့သော် ၁၇၇၅ ဇွန်လဒုတိယအကြိမ်ကွန်တီနယ်တယ်ကွန်ဂရတ်တွင် အမေရိကန်လွတ်မြှောက်ရေး အတွက် စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် အများသဘောတူ(ကန့်ကွက်သူမရှိ)ခန့်အပ်ကြသည်။တည်ကြည်သောဥပဓိ၊အကျင်းစာရိတ္တ၊ထူးချွန်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စစ်ရေး တို့ကြောင့် ၄င်းအားအများက ကိုးစားကြခြင်းဖြစ်သည်။စစ်အတွင်းကာလများတွင် လစာမယူပဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
1. လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲတွင် အောင်မြင်သည့် စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။အလွန်တော်သည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း သူနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်သည့် ရန်သူအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ ညံ့ဖျင်းမှုများကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ မိမိဖက်မှ အထိမနာရအောင် ထိန်းသိမ်းစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
2. ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် အထွေအထူးအကြံဥာဏ်ထုတ်သည်မရှိပေ။သို့သော် ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲစဉ်အတွင်း အငြင်းပွားမှုများအကြား သူ၏ကြီးမားသည့် ဂုဏ်ရှိန်ကြောင့် သူထောက်ခံလျှင် ကန့်ကွက်သူနည်းရသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
3. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံးသမ္မတအဖြစ် သူကဲ့သို့ အကျင့်စာရိတ္တ၊အတွေးအခေါ်၊အုပ်ချုပ်ရေး ဘက်စုံကောင်းသူတင်မြှောက်နိုင်သည်မှာလည်း အလွန်အကျိုးများသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် ထိုကဲ့သို့ ရာထူးနေရာမျိုးတွင် အရွေးခံရသူအများစုမှာ အဖျားရှုးသွားလေ့ရှိသဖြင့် ၀ါရှင်တန်မှာ အလွန်သင့်တော်မြတ်သည့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်။ မူလချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပါ အနှစ်သာရများမပျက် အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရအာဏာကို တည်ငြိမ်စွာ လက်လွှဲသည့် အစဉ်အလာကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
4. ထို့ပြင် သမ္မတသက်တမ်း နှစ်ကြိမ်သာထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် အစဉ်အလာကောင်းကို စတင်သူလည်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ သမ္မတအဖြစ် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သက်မဲ့ ထမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အာဏာထူထောင်ပြီး အာဏာရှင်ဆန်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်မည်ကို တွေးဆကာ ရာထူးသက်တမ်းနှစ်ကြိမ်သာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားသော အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ဂျိမ်း မဒီဆင်၊သောမက် ဂျက်ဖာဆင်၊ဘင်ဂျမင် ဖရမ်ကလင် တို့ကဲ့သို့ အတွေးအခေါ်၊ထိုးထွင်းဥာဏ်ကောင်းလွန်းသူမဟုတ်သော်ငြား စစ်အတွင်း၊စစ်လွန် ကာလများတွင် စံပြအဖြစ်အများကို သြဇာလွှမ်းမိုးပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်သူဖြစ်သည်ကိုမူမငြင်းသာပေ။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 9:46 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest